jeudi, 29 mars 2018 16:08
Nitokona efa hatrami'ny omaly alarobia 28 mars harivariva ireto mpamily kamiao mpaka entana ao amin'ny seranantsambon'ny Toamasina, noho ny fitarozahan'ny famoahana kaontenera ao amin'ny tobim-pitehirizana entana.
Ny orin'asa MICTSL moa no miandraikitra ny fampidinana sy fampiakarana ireo kaontenera eny ambony sambo ary mampiakatra na mampidina azy koa eny ambony kamiao.
tsy ampy fitaovana anefa ny orin'asa MICTSL ka dia kaontenera roa isan'ora ihany no vitany ny mandefa azy, etsy ankilany ny ladoany mbola maro fepetra, ka maharitra 7 andro ny entana vao mivoaka.
Rehefa tafiditra ao anaty seranana anefa ny kamiao, dia tsy avelan'ny ao anaty seranatsambo hivoaka ny fiarakodia ny mpamily sao ahiana angalatra, ka dia maharitra 8-24 ora miandry anaty kamiao, tsy misakafo, tsy mivoaka amin'ny maha olombelona.
Mikaikaika ireto mpamily satria ny tompon'entana ihany koa tsy manaiky ny entany ela be vao tonga any aminy, ka dia nienjan-droa ny tady. Ny fandaminana ao anaty port tsy mizotra araky ny tokony ho izy hoy hatrany ireto mpitatitra.
Nitaky fihaonana tamin'ny tompon'andraikitry ny MICTSL ireo mpitatitra, androany maraina vao tontosa ny fihaonana, nitady marimaritra iraisana.
Tsy mbola nilamina tanteraka hatreto, ka dia mbola ny entana tsy ao anaty kaontenera aloha amin'izao no tafiditra sy tafavoaka n'ny port, fa mbola mitohy ny dinika.
Port Toamasina: Trop deux poids et deux mesures
Port Toamasina: Négociation en cours »